Seal-Weld 6000 Psi Class 2500LB Valve feno karbaona vy, China China Seal-Weld 6000 Psi Class 2500LB Full Port Threaded Carbon Steel Ball Valve Manufacturer, Mpamatsy, Factory - Zhejiang Huaxia Flow Technology Co., Ltd (Titan valve no marika anay )
Tombo-kase 6000 Psi kilasy 2500LB Valves feno kofehy vy
Titan-valve valves vita amin'ny vy vy sy vy vy. Ny valva baolina Titan dia azo amboarina ho toy ny vatana iray, vatana roa ary singa roa misy kofehy vita amin'ny tombo-kase ho an'ny tailpiece dia nanala ny mety ho an'ny rambo tsy misy ratra, mivoaka na "mitsoka" amin'ny serivisy.
Valizy baolina roa Titan roa dia vita avy amin'ny cast CF8M na WCB izay mifanaraka amin'ny NACE MR-0175. Ny tombo-kase nafatotra teo anelanelan'ny vatana sy ny vodin'ahitra dia nanala ny mety ho fitrandrahana tsy misy ratra, mivoaka na "mitsoka" rehefa eo amin'ny toeran'ny asa.
Ny valva rehetra dia nosedraina mifanaraka amin'ny fenitra API 598 na amin'ny fitsapana akorany na seza.
● Vatan'ny vy
● Fametahana tombo-kase
● Seranana feno
● 2 ”azo jerena ao amin'ny Port Standard ihany
1 Body AZY 261
2 lohany AZY 261
5 seza pijery
6 Washer thrust pijery
10 Voan'ny Voanjo A2-70
11 Fampiharana fanidiana SS
1 1/2 " 1.5 5.3 4.6 10 3.85 13.8
ISO 5211 Direct Mount Pad Flanged Floating Ball Valve JIS10K
Valiny roa WCB manidina Valve Ball Valve JIS 10K
Stainless Steel CF8 Flanged Floating Ball Valve ANSI 150LB